Lionel Messi iyo Eden Hazard oo hoggaaminaya sagaalka xiddig ee aan weli ciyaarin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Lionel Messi iyo Eden Hazard oo hoggaaminaya sagaalka xiddig ee aan weli ciyaarin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan
September 11, 2019 at 11:00 Lionel Messi iyo Eden Hazard oo hoggaaminaya sagaalka xiddig ee aan weli ciyaarin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan2019-09-11T11:00:20+01:00 CAYAARAHA
(Madrid) 11 Sebt 2019. Lionel Messi, Eden Hazard iyo Chicharito ayaa ka mid ah sagaal ciyaaryahan ee illaa iyo haatan aan ciyaarin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Kulammada qarammada ee heerka caalami ayaa soo dhammaaday, waxaana dib loogu laabanayaa kulammada horyaallada qaaradda Yurub isbuuca soo socda.
Haddaba horyaalka La Liga ayaa la ciyaari doonaa kulankiisii afaraad, laakiin muddo bil ah kaddib markii uu kal ciyaareedkan bilowday waxaa jira weli xiddigo waa weyn oo aan ciyaarin horyaalka La Liga fasal ciyaareedkan.
Arrimo kala gedisan ayay xiddigahaasi ku seegeen ciyaaraha La Liga, qaarkood ayaa ku maqnaa dhaawac, halka qaarkoodna aysan weli fursad helin, maadaama xilli dhow la la soo wareegay.
Waxaan haddaba halkaan hoose ku eegi doonnaa xiddigaha waa weyn ee aan weli ciyaarin horyaalka Spain oo weli sugaya inay dheelaan kulankoodii ugu horreeyey horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
>- Lionel Messi: Shaki la’aan, kubadda cagta Spain waxbaa ka maqan Messi la’aantiis, ciyaaryahanka xulka qaranka Argentina ayaana weli ciyaarin horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan kaddib dhaawac kubka ka soo gaaray, inkastoo la filayo inuu ciyaarayo kulanka isbuuca soo socda, haddana weli lama xaqiijinin inuu dheeli doono.
>- Eden Hazard: Waa mid ka mid ah xiddigihii xagaaga la la soo wareegay oo aan weli ciyaarin, Jamaahiirta kooxda Real Madrid ayaa sugaya inay arkaan xiddiga reer Belgium oo ka soo muuqda shaxdooda, balse dhaawac ayaa u diiday inuu ciyaaro saddexdii kulan ee ugu horreeyey horyaalka, waxaana la filayaa in Hazard uu dheelo Sabtida kulankiisii ugu horreeyey.
>- Javier Hernandez: Wiilka magaciisa loo garan ogyahay Chicharito ayaa ku soo laabtay Spain, waxaana uu markaan xiran doonaa maaliyada kooxda Sevilla, waxa uu u soo wareegay maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga Yurub, waxaana lagu wadaa inuu kulankiisii ugu horreeyey horyaalka ciyaari doono todobaadka soo aaddan.
>- Eder Militao: Ciyaaryahanka xulka qaranka Brazil ayaan weli wax fursad ah ka helin Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane, Sergio Ramos iyo Raphael Varane ayaa weli ah labada daafac dhexe ee ku soo bilowda kulan walba, balse Militao ayaa la filayaa inuu dhawaan fursaddiisa heli doono.
>- Nacho Monreal: Isagu waa ciyaaryahan kale oo dib ugu soo laabtay dalka Spain maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga, daaficii hore ee kooxda Arsenal ayaa la filayaa inuu u safto Naadiga Real Sociedad kulamada afaraad ee horyaalka La Liga.
>- Hector Herrera: Kabtankii hore ee kooxda FC Porto ayaa naadiga Atletico Madrid ka noqday xiddig aan la isticmaalin, sheekada layaabka leh ayaana ah in Hector Herrera uusan dhaawac ahayn, balse waxa uu ka soo muuqan kartaa markiisii ugu horreeyey horyaalka La Liga isbuuca soo socda.
>- Alphonse Areola: Goolhayahan waxa uu Real Madrid u yimid inuu bedelo Keylor Navas, waxaana uu ka dambeyn doonaa goolhaye Thibaut Courtois, goolhayihii PSG ayaa ku qasban inuu sugo in mudo ah si uu u ciyaaro kulankiisa ugu horreeeya ee horyaalka La Liga.
>- Alex Moreno: Kooxda Real Betis ayaa u muujisay kalsooni markii ay la wareegeen, lama filaanna ma noqon doonto inuu kulankiisa ugu horreysa ciyaaro isbuuca soo socda, waxa uu wacdarro ka dhigay kooxda Rayo Vallecano kal ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Thierry Correia: Saxiixii ugu danbeeyay ee Valencia ayaa ah wajiga cusub ee kubadda cagta Spain, kooxda ayaana dooratay inay daafaceeda ku xoojisay xiddig da’yar maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala iibsiga xiddigaha, balse weli waxa uu sugayaa kulankiisii ugu horreeyey ee horyaalka Spain.
« Ergada Shirka Dhuusamareeb oo Su’aalo waydiiyay Wasiirka Amniga Somaliya
Garo Ilaha Kheyraadka Nafeed Q.1aad (WQ: Cabdirasaaq Sandheere) »